Achicha Vanilla achicha + Easy Buttercream (Video Tutorial) - Achicha
Ntụziaka Vanist Achicha Na Mfe Buttercream
Nke a vanilla achicha Ntụziaka nwere ịtụnanya ekpomeekpo, dị nro, ígwé ojii dị ka obere achicha, ma nwee oke mmiri. Iji ntụ ọka achicha, usoro ude na-agbakwunye, ọtụtụ bọta, na aka mmanụ na-eme ka achicha a bụrụ mmiri ruo ọtụtụ ụbọchị. Light na creamy buttercream frosting nke ahụ dị mfe ịme ma ọ bụghị oke ụtọ na-eme nke a PERFECT vanilla achicha uzommeputa. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmasị ndị enyi gị, m ga-egosi gị otu esi eme ọmarịcha palette mma buttercream okooko osisi maka ịchọ mma!
Na-esote m ọcha velvet buttermilk achicha, na lemon bluuberi achicha , achicha vanilla a bụ otu n’ime usoro nri anyị kachasị ewu ewu. M na a na-eji a uzommeputa ihe karịrị afọ iri maka m achicha ahịa na-enweghị ihe ọ bụla ma ama mma reviews. Na ntọhapụ nke m akwụkwọ achicha mma , Achọpụtara m na achicha a na-ewu ewu n'ezie! Nke a bụ achicha na-atụgharị ndị ahụ 'Enweghị m mmasị na achicha' na OMG anyị kwesiri ịdebanye aha gị ugbu a ndị ahịa! Nke a zuru oke maka achịcha agbamakwụkwọ, achicha ụbọchị ọmụmụ ma hapụ onye ọ bụla na-arịọ gị maka uzommeputa.
Enwere TON nke ozi na blog a ma amaara m na ọ nwere ike iyi ihe siri ike ma m swearụọ iyi na ọ bụghị ihe efu! Ọ bụ ihe niile ọtụtụ narị mmadụ jụrụ m maka ọtụtụ afọ ka m wee gbalịa ịza ọtụtụ ajụjụ dịka m nwere ike ma mee ka ị nwee ihe ịga nke ọma na nke mbụ gị. M kwuru na ọ bụ ihe kacha mma vanilla achicha esi esi ebe ahụ ka m gosi gị ya!
Vanilla achicha Efrata
Ntụ ọka (ntụ ntụ-obere protein) dị mkpa na uzommeputa a. O nwere obere protein karịa ntụ ọka niile. Ngwunye protein dị ala na-erughị mmepe gluten nke na-ebute nsị dị nro ma dị nro. Achịcha achicha bụ ihe anyị ji eme achịcha achịcha mgbe niile maka achịcha kachasị mma.
Adakwala maka “naanị tinye ntụ ọka na ntụ ọka mgbe niile”. Ọ naghị arụ ọrụ maka uzommeputa a n'ihi na anyị na-eji agbara creaming usoro . Ọ bụrụ na ị jiri ntụ ọka nwere nzube, achicha gị ga-adị ka nke ọka.
Ọ bụrụ na ịnọ na mba ọzọ, ị nwere ike ịchọta ntụ ọka achicha mana ọ nwere ike ịdị mkpa ịnye ya n'ịntanetị. Na UK, chọọ Shipton achicha na achicha achicha .
Pro-n'ọnụ - Achicha achicha nwere protein nke 9% ma ọ bụ obere karịa chọọ ntụ ọka nke gosipụtara ọdịnaya protein ma ọ bụ jụọ ntụ ọka nke mpaghara gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ntụ ọka AP, ana m atụ aro ịnwale nke m ọcha achicha uzommeputa kama.
Kedu Vanilla Kasị Mma?
N'ihi na vanilla bụ isi ekpomeekpo maka achicha vanilla, ihe dị mkpa. Ana m eji ezigbo vanilla wepụ mgbe niile. Ana m enweta ya site na Costco n'ihi na ọ bụ ọnụahịa kacha mma. I nwekwara ike iji ahihia vanilla ma ọ bụ mpekere bekee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa. Echegbula onwe gị banyere vanilla wepụ na-agba aja aja, ị gaghị enwe ike ịgwa ya ozugbo achicha ahụ.
Gbalịa pụọ ​​na ekpomeekpo vanilla ọ gwụla ma ị masịrị ụtọ ahụ nke ụfọdụ ndị na-eme na nke ahụ dị mma! Ma kemgbe m chọpụtara ihe doro anya vanilla wepụ si , Enweghị m ike ịlaghachi azụ haha. Ok nke a nwere ike ọ bụghị n'ezie mana ọ bụ eziokwu mana still Gụkwuo banyere ọdịiche dị na vanilla doro anya na nke okike.
Ndụmọdụ Maka Ọganiihu (tụkwasa m obi, ịchọrọ ịgụ nke a)
Tụọ akụkụ gị niile na a n'ọtụtụ. Ime bụ sayensị na n'ihi na ị nwere ike tinye ntụ ọka buru ibu ma ọ bụ nwee ntụ ọka ezughi oke mgbe ị na-eji iko, a chọrọ ọnụ ọgụgụ maka izi ezi. Nwere ike ịzụta kichin kichin na wara wara wara n'ọtụtụ ụlọ ahịa nri ihe na-erughị $ 20.
Weta bota gị, mmiri ara ehi, na àkwá na ọnọdụ okpomọkụ . Ime ụlọ okpomọkụ ga-emepụta emulsion nke ọma mana ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị ị na-eme na-ajụ oyi mgbe ahụ batter agaghị agwakọta nke ọma na ị ga-ejedebe mmiri mmiri na ala nke achicha ahụ. Pịa njikọ dị n'elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otú ị ga-esi mee ka àkwá gị, mmiri ara ehi, na bọta nke ọma.
Atụla egwu ịgwakọta . Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ụdị ude a na-eme tupu ị nwee ike ịpụ apụ banyere ọkwa agwakọta n'ihi na anyị ga-agwakọta nkeji abụọ. Mgbe ị na-eme achicha na omenala, ị gaghị agwakọta ogologo oge n'ihi na ị ga-agwakọta achịcha achicha gị ma mepụta nnukwu oghere (tunnels).
Na agbara creaming metho d, anyị na-ekpuchi ntụ ọka ahụ na bọta na mbụ nke na-egbochi gluten ịmalite. Anyị na-ejikwa ntụ ọka achicha nke na-esighi ike dịka ntụ ọka mgbe niile ka ọ chọọ ịgwakọta ya. Igha ude ure na-enyekwa anyị ohere itinyekwu mmiri mmiri na shuga na achicha karịa ụdị ngwakọta a na-ahụkarị nke mere na achicha vanilla a dị ezigbo mmiri ma dịkwa nro.
Lelee ogo gị - Ọ bụrụ na i bi n’elu 5,000 ft ị nwere ike belata obere ntụ ọka gị ka obere achịcha vanilla gị ghara ịda.
Vanilla achicha Nzọụkwụ-Site-Nzọụkwụ
Kwụpụ 1 - Kpochapu oven gị na 335ºF. Ọ na-amasị m ịme achịcha na obere okpomọkụ n'ihi na ọ na-ebute achicha dị ụtọ mana ọ bụrụ na oven gị enweghị ikike ahụ, ọ ka dịkwa mma ịkpa achịcha na 350ºF. Might nwere ike ịnwe obere dome mgbe ịchicha ma ị nwere ike belata ya.
Kwụ na 2kwụ 2 - Tinye akpa mmiri ara ehi (4 oz) n'ime iko ozo. Tinye na mmanụ ma debe ya.
Kwụ na 3kwụ 3 - N'ihe nke abụọ nke mmiri ara ehi, gbakwunye nsen na wepụ vanilla. Whisk ejighị ya kpọrọ iji gbari àkwá.
4kwụ na 4kwụ 4 - Debe ntụ ọka gị, shuga, soda, ntụ, na nnu n'ime nnukwu efere nke ihe nkwụnye ihe gị na mgbakwunye akwa ahụ. I nwekwara ike iji igwekota aka.
* tupu ị jụọ, nke a bụ nke m Bosch eluigwe na ala tinyere njikọ njikọta ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu ihe.
Nzọụkwụ 5 - Gbakwunye butter gị dị nro na chunks mgbe ị na-agwakọta ala. Gwakọta ihe niile ruo mgbe ọ dị ka aja na-adịghị mma.
Nzọụkwụ 6 - Ugbu a tinye na mmiri ara ehi / mmanụ ngwakọta n'otu oge ma weta ọsọ ọsọ na 4 (na KitchenAid ma ọ bụ ọsọ 2 na Bosch) ma gwakọta nkeji abụọ zuru oke iji mepee usoro achicha ahụ. Batter ahụ ga-abụ nke na-acha ọcha, na-acha ọcha, ma ọ gaghị emebi emebi ma ọ bụ gbajie.
Kwụpụ 7 - Ugbu a, anyị ga-eji nwayọ tinye akwa / akwa mmiri ara ehi anyị mgbe anyị na-agwakọta ala. Anyị ji nwayọ na-agbakwunye ya n'ihi na anyị na àkwá anyị na mmiri mmiri na-emepụta ihe emulsion bụ nke otu achicha anyị si enweta mmiri. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ya ngwa ngwa, mmiri mmiri gị ga-ekewapụ na bọta wee daa na ala nke achicha ahụ.
Nzọụkwụ 8 - Kewaa batter n’ime ite atọ, 8 ″ x2 prepared ejikere achicha goop ma ọ bụ tọhapụ pan gị. Maka mgbakwunye mkpuchi, ịnwere ike itinye akwụkwọ akpụkpọ anụ n'ime ala nke pan ahụ mana ọ chọghị n'ezie. Mejupụta pans ahụ ihe dị ka 3/4 nke ụzọ zuru ezu. Ana m eji ihe elele anya iji hụ na pans m niile nwere otu bat n’ihi na abụ m onye na-achọkarị izu oke dị ka lol.
9kwụ na 9kwụ 9 - Mee achịcha gị maka minit 25-30 ruo mgbe etiti ahụ setịpụrụ ma ezé ezé ga-apụta dị ọcha. Nwere ike ịchọ oge karịa ya atụla ụjọ ịme achịcha ahụ ogologo oge.
Nzọụkwụ 10 - Wepu achịcha na oven ma debe ha n’elu ite oyi. Hapụ ha ka ha dajụọ ruo mgbe achịcha na-ekpo ọkụ. Ekwela ka ha nwee oyi ma ọ bụ na ha ga-arapara.
Nzọụkwụ 11 - Mgbe achicha ndị ahụ dị jụụ, tụgharịa ha n’elu ite dị jụụ iji mee ka ọ dị jụụ. Mgbe ahụ, m kechiri ha na plastik, tinye ha na ngwa nju oyi ma ọ bụ friza maka 30 nkeji iji mee ka achicha ahụ sie ike ka ọ dịrị ya mfe ijikwa tupu m kụọ ya. I nwekwara ike ifriizi achịcha gị ma ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ịjụ oyi ha ozugbo.
Otu esi eme mfe Buttercream
Ọ bụrụ na ị maara nke ọma ịme achịcha, nweere onwe gị ịhapụ akụkụ a mana ọtụtụ n'ime gị agwala m ka m mụtakwuo omimi banyere etu m si eme oyi ma jupụta achịcha m nke mere na ọ bụ ihe m ga-agabiga na ngalaba a.
Ezie na achịcha na-zuo ike, ugbu a bụ ezigbo oge iji mee gị mfe buttercream . M hụrụ n'anya na-eme mfe buttercream n'ihi na ọ na-abịa ọnụ ngwa ngwa na-atọ ụtọ dị ka swiss meringue buttercream mana ngwa ngwa.
Kwụpụ 1 - Tinye gị egg Pasicized akwa ọcha na powdered sugar na nnukwu efere nke gị guzoro igwekota na whisk mgbakwunye mgbakwunye. Ghichaa elu maka otu nkeji ka shuga gbazee.
Nzọụkwụ 2 - Tinye butter gị dị nro na obere iberibe mgbe ị na-agwakọta ala ruo mgbe agbakwunye ya.
Kwụpụ 3 - Tinye gị vanilla na nnu. Dịkwuo igwekota ọsọ elu na otiti na elu ruo mgbe buttercream bụ ìhè na ude. Nye ya uto. Ọ bụrụ na ọ ka na-atọ ụtọ ka bọta, nara ụtarị. Ọ ga-atọ dị ka ụtọ ice cream.
Ọ bụrụ na buttercream gị na-arapara n'akụkụ akụkụ nke nnukwu efere ahụ ma ghara ịpịa, bọta gị nwere ike ịdị oke oyi. Wepu 1 iko buttercream ma gbazee ya na microwave ruo mgbe ọ ga-agbaze.
Gbakwunye buttercream gbazee n'ime buttercream oyi ma gaa n'ihu na-apịa ya ruo mgbe ọ dị mfe ma dị ọkụ. Nke a nwere ike were oge 15-20 yabụ ugbu a ga-abụ ezigbo oge iji saa efere gị
Nhọrọ: Gbanwee na paddle ma mee ka buttercream gị jikọta ala maka minit 10 iji wepụ ihe ọ bụla na-egosipụta ya ka ị wee nwee buttercream dị mma ma dịkwa nro. I nwekwara ike ịgbakwunye ụfọdụ agba nri na-acha ọcha ma ọ bụ obere ntụ nke nri na-acha odo odo iji mee ka buttercream gị dị ọcha iji mee ka ọ dị ọcha.
Etu ị ga-esi chọọ Achicha Vanilla Nzọụkwụ-Site-Nzọụkwụ
Aga m eji ụfọdụ paịlị buttercream mara m mma nke vanilla m jiri teknụzụ palette mara mma. Ọ bụrụ na ịnweghị mma palette ị nwere ike icho mma achicha ahụ n'ụzọ ọ bụla masịrị gị. Lelee nke m otú icho mma gị na mbụ achicha video n'ihi na ihe echiche na m na-aga n'elu ọkọlọtọ ngwaọrụ m na-eji maka achicha decorating.
Kwụpụ 1 - Ewepụtụ domes apụ gị achịcha nke mere na ha tojupụtara mma na larịị. Ana m eji mma achicha a kara aka mee nke a.
Nhọrọ : belata ihu aja aja nke mere na mgbe iberi achịcha gị, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị achịcha ọcha. Nke a bụ ihe m na-emekarị maka achịcha agbamakwụkwọ ebe anya dị mkpa.
Nzọụkwụ 2 - Debe achicha mbu gi n’elu mbadamba achicha 6 or ma obu tinye n’efere achicha gi.
Kwụpụ 3 - Gbasaa oyi akwa buttercream na achicha ahụ, agbapụ m maka ihe dịka 1/4 ″. Gbalịa ime ka ọkwa gị dị larịị.
Kwụpụ 4 - Add gị ọzọ oyi akwa nke achicha na ikwugharị usoro na buttercream na rụchaa na n'elu oyi akwa nke achicha.
Nzọụkwụ 5 - Gbasaa a mkpa oyi akwa nke buttercream nile achicha. A na-akpọ nke a akwa mkpuchi ma ọ na-emechi ya na crumbs ka ha wee ghara ịbanye n'ime akwa achicha gị. Tinye achicha gị na ngwa nju oyi ma ọ bụ friza maka oge 15 ruo mgbe buttercream siri ike na aka.
na -ekpuchi achicha rectangle na fondant
Kwụpụ 6 - Tinye akwa nke abụọ nke buttercream. M na-amalite n’elu wee gbasaa ya na spatula. Mgbe ahụ, m na-agbakwunye buttercream n'akụkụ ma na-edozi ya niile na bench bench. Lee vidiyo dị n'okpuru maka ntuziaka ndị miri emi gbasara ichi achicha. Weghachite achicha gị na ngwa nju oyi maka nkeji iri na ise ruo mgbe buttercream siri ike. Ma ọ bụ ị nwere ike ịhapụ achicha gị na ngwa nju oyi n’abalị ma ọ bụrụ na ịchọrọ icho mma n’echi ya.
Kwụpụ 7 - Agba gị buttercream. M acha ihe dị ka iko 1/4 nke agba ọ bụla, ìhè, na ọkara pink site na iji agba agba nri pinko Americolor.
Nzọụkwụ 8 - Jiri mma palette gị mee okooko osisi buttercream gị (lee vidiyo maka nkọwa zuru ezu). Etinyekwara m fesa ole na ole na-acha ọcha ebe a na ebe ahụ maka udidi.
Ibu ukwu nke palette mma na ụfọdụ ọchịchịrị pink buttercream
bechapu akụkụ nke palette mma na efere iji wepụ ngafe
pịa mma palette n’elu achicha ahụ
sere azụ ime petal
megharịa usoro a ma mee okooko osisi 5 ma obu isii
Na-etinyekwu petals n’elu ya na pink buttercream
tinye ufodu na agba ocha na etiti ifuru
ịdị iche iche gị nha nke okooko osisi gburugburu achicha
Ma lee, ị nwere ya! A ooh na-atọ ụtọ Them achicha nke ahụ dịkwa mma! M na-etinyekarị achịcha m na ngwa nju oyi ruo mgbe m dị njikere ijere ha ozi ma ọ bụ ọ bụrụ na m ga-anapụta ha mana achịcha oyi nwere ike ịnụ ụtọ. Jide n'aka na ị ga-ewepụ achicha gị n'ime ngwa nju oyi awa ole na ole tupu ị mee atụmatụ iri ya. Easy buttercream nwere ike ịbụ na ụlọ okpomọkụ 24 awa otú enweghị nchegbu banyere ya na-aga ọjọọ.
Nwere ike iji achicha Vanilla achicha achicha maka Cupcakes?
A na-ahazi uzommeputa a iji mee achịcha zuru oke nke mere na ọ bụghị nke kachasị mma n'echiche m maka cupcakes. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ iji ha maka iko kọfị, gbalịa nke m vanilla cupcake uzommeputa kama.
Ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ iji usoro a, ị ga-achọ ime mgbanwe ole na ole.
Belata mmiri mmiri na nhazi site na ọkara ma hapụ mmanụ niile.
Mee ha na 400º F maka nkeji ise wee belata okpomọkụ na 335º F maka 10 ọzọ ma ọ bụ ruo mgbe ezé ezé ga-apụta dị ọcha. Mmekwu okpomọkụ na mmalite ga-enyere cupcake dome elu ma mee njikọ siri ike na cupcake wrapper.
Ejula ihe ndị achicha cupcake ahụ karịa 2/3 nke ụzọ zuru ezu ma ọ bụ na ha ga-ejupụta ma gafee ala.
Ntụziaka a mere 36 cupcakes.
Nwere ike ikpuchi achicha Vanilla a dị ụtọ?
Azịza ya bụ ee! Nwere ike ikpuchi achicha a ihunanya ọ bụrụhaala na ị naghị ajụ oyi ya na ude mmiri chiri. Ude chiiz frosting anaghị eme nke ọma n’akụkụ fondant, ọ na-eme ka ọ na-akwa ákwá ma nwee soggy. Mgbe achicha gị na-ehicha ma mee ka oyi akwa ya na oyi akwa ikpeazụ nke buttercream ị nwere ike kpuchie ya na fondant.
Achicha Berry Chantilly
Pink Velvet achicha
Otu esi eme achicha vanilla kacha mma na usoro ude azu. Super ooh, siri udidi na-agaghị echefu echefu ekpomeekpo. Oge Nkwadebe:iri na ise Nkeji Oge nri:30 Nkeji Oge niile:Anọ Nkeji Calorisị:445kcal
Vanilla achicha Recipe
▢4 ounce (Ogbe 113 g) mmiri ara ehi niile agwakọtara ya na mmanụ
▢3 ounce (85 g) mmanụ canola
▢6 ounce (Ugba 170 g) mmiri ara ehi niile agwakọta ya na akwa
▢1 ngaji (1 ngaji) wepụ vanilla ma ọ bụ 1 vanilla bean pod
▢3 buru ibu (3 buru ibu) akwa ime ụlọ okpomọkụ
▢13 ounce (Ogbe 368 g) ntụ ọka
▢13 ounce (Ogbe 368 g) granulated shuga
▢3 teaspoons (14 g) ntụ ịme achịcha
▢1/4 ngaji (1/4 ngaji) ntụ iji koo achịcha
▢1/2 ngaji (1/2 ngaji) nnu
▢8 ounce (Ogbe 227 g) unsired butter eme ka ime ụlọ dị nro ma ọ gbazee
Mfe Buttercream Frosting
▢16 ounce (454 g) ntụ ntụ
▢4 ounce (Ogbe 113 g) pasteurized akwa ọcha
▢abụọ teaspoons (abụọ teaspoons) wepụ vanilla
▢16 ounce (454 g) unsired butter eme ka ime ụlọ dị nro ma ọ gbazee
▢1/4 ngaji (1/4 ngaji) nnu
▢1 TINY drop daa (1 dobe) acha odo odo nri dechapụ agba agba (nhọrọ)
▢3 tụlee electric pink agba? maka okooko osisi
▢1 Tebụl ọcha fesa maka icho mma
▢8 'x 2' achicha achịcha (3)
D MKPA : Nke a bụ ihe kacha mma vanilla achicha n'ihi na m na-eji a ọnụ ọgụgụ ya mere ọ tụgharịa si n'ụzọ zuru okè Ọ bụrụ na ị na-tọghata iko m nwere ike ekwe nkwa ido nti utịp. Gbaa mbọ hụ na bọta, akwa, mmiri ara ehi niile dị n’ime ụlọ ma ọ bụ sie ntakịrị. Hụ ọkwa m banyere otu esi eji ọnụ ọgụgụ ma ọ bụrụ na ịmaghị otu esi atụ nha.
Okpomọkụ dị ọkụ ruo 335º F / 168º C. Kwadebe achicha achicha atọ nke 8'x2 na achicha achicha ma obu ihe ozo enyere gi aka.
Debe mmiri ara ehi 4 na iko dị iche. Tinye mmanu n’ime mmiri ara ehi ma dobe ya.
Na 6 oz nke mmiri ara ehi fọdụrụ, gbakwunye vanilla na akwa akwa ụlọ. Were nwayọ jiri nwayọọ gwakọta. Wepụ ya.
Debe ntụ ọka, shuga, ntụ ọka, soda, na nnu n'ime nnukwu efere nke ihe nkwụnye ihe gị na mgbakwunye akwa ahụ.
Tụgharịa igwekota n’elu ọsọ na-adịghị nwayọ. Jiri nwayọ tinye chunks nke butter gị dị nro ruo mgbe agbakwunyere ya mgbe ahụ ka ihe niile gwakọta ruo mgbe ọ dị ka aja na-adịghị mma.
Tinye ngwakọta mmiri ara ehi gị / mmanụ n'otu oge na ihe akọrọ ma gwakọta ya na ọkara (ọsọ 4 na kitchenaid, ọsọ 2 na Bosch) maka nkeji 2 iji zụlite usoro ahụ. Debe oge! Echegbula, nke a agaghị agabiga-agwakọta achicha ahụ.
Mgbe minit 2 gasịrị, kpochaa efere ahụ. Nke a bụ otu ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ị tụọ ya, ị ga-enwe ezigbo ntụ ntụ ntụ na ihe ndị na-agwaghị agwa na batter gị. Ọ bụrụ na ị mee ya ma emechaa, ha agaghị agwakọta nke ọma.
Jiri nwayọ tinye ya na ngwakọta mmiri ara ehi / akwa ka ị na-agwakọta na ala, na-akwụsị ịchacha efere ahụ otu oge ọzọ ọkara. Gwakọta ruo mgbe agwakọtara. Batter gị kwesịrị ịdị oke ma ghara ịgba ọsọ.
Kewaa batter n’ime ite achịcha gị tee gị ma mejue 3/4 nke ụzọ. Ọ na-amasị m itu pans m iji hụ na ha dị ọbụna.
Ime ruo minit 30 ma lelee achicha gị. Mee 'ule a mere'. Tinye nha nha ka ị mara ma ọ ga-abịa dị ọcha. Mgbe ụfọdụ mmiri batter apụtaghị ya mere hụ na ọ dị ọcha ma ọ bụghị naanị mmiri. Jiri nwayọ metụ elu achicha ahụ, ọ na-apụta ọzọ? Igwe ọkụ dị iche iche dị iche iche ma ọ bụrụ na emebeghị ya, ghee obere oge karịa (2-3) wee lelee ọzọ ruo mgbe ọ gafere ule 'emechara.
Wepu achicha na oven ma nye ha mgbata n’elu countertop iji hapu ikuku ma gbochie oke iwedata. Hapụ ha ka ha kpụkọọ n’elu oche dị jụụ ruo mgbe ha ga-ekpo ọkụ.
Mgbe ịjụrụ oyi maka ihe dị ka nkeji 10, tinye akwa mkpuchi ahụ n'elu achicha ahụ, tinye otu aka n'elu akwa mkpuchi ahụ na otu aka n'okpuru pan wee tụgharịa pan na akwa mkpuchi ahụ ka pan ahụ wee gbadata na jụrụ ogbe. Wepu pan ahụ nke ọma. Tinyegharịa pan nke ọzọ.
Mgbe achicha zuru oke nke ọma, jiri nlezianya kechie ha na plastik ma tinye ha n'ime friza ma ọ bụ friji maka ihe dị ka minit 30 iji mee ka achịcha ahụ sie ike ma mee ka ọ dị mfe iji aka maka ịkwado.
Tinye akwa ọcha na shuga ntụ ntụ na nnukwu efere. Gbakwunye whisk ahụ, jikọta ihe ndị dị ala wee pịa elu maka minit 5. Tinye vanilla wepụ na nnu.
Tinye na bọta gị dị nro na ụyọkọ ma pịa ya ihe mgbakwunye whisk iji jikọta. Ọ ga-adị ka curdled na mbụ. Nke a bụ ihe nkịtị. Ọ ga-adịkwa mma na-acha odo odo. Nọgide na-apịa ihe.
Kpoo elu maka minit 8-10 ruo mgbe ọ na-acha ezigbo ọcha, na-enwu gbaa ma na-egbuke egbuke. Ọ bụrụ n’ịkụghị ya ọnụ, ọ ga - eme ka isi bute ya.
Nhọrọ: Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmịcha ọcha, gbakwunye na obere obere odo odo iji gbochie edo edo na bọta (oke ga-eme ka isi awọ na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo.)
Nhọrọ: Gbanwee na mgbakwunye na paddle ma jikọta ala maka minit 15-20 iji mee buttercream dị ezigbo mma ma wepu ikuku. Nke a na-achọghị ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie creamy frosting, ị na-achọghị ikwu ya.
Mgbe emechara achịcha gị, jupụta ha na ntu oyi kachasị amasị gị na ntu oyi n'èzí. Y’oburu n’ibughi na ichota achicha, lelee otu m g’esi eme akpa nke gi! Lelee vidiyo ahụ ka m si mee palette mma buttercream okooko osisi.
Tụlee ihe mejupụtara gị iji zere ọdịda achicha. Iji a kichin ọnụ ọgụgụ maka mmiri dị oke mfe ma nye gị nsonaazụ kacha mma oge ọ bụla.
Gbaa mbọ hụ na ihe niile oyi na-atụ gị bụ okpomọkụ ụlọ ma ọ bụ nke dịtụ ọkụ (bọta, mmiri ara ehi, àkwá, iji mepụta ihe na-agwakọta ọnụ.
Ga-eji ntụ ọka achicha mee uzommeputa a. Adakwala maka 'naanị tinye ọka ọka na ntụ ọka' mgbe niile. Ọ naghị arụ ọrụ maka uzommeputa a. Achicha gị ga-adị ka nke ọka. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ntụ ọka achicha, jiri ntụ ọka achịcha nke na-adịchaghị nro dị ka ntụ ọka achịcha mana ọ ka mma karịa ntụ ọka niile.
Ọ bụrụ na ị nọ na UK ịchọ Shipton achicha na achicha achicha . Ọ bụrụ na ịnọ n'akụkụ ọzọ nke mba ahụ, chọọ ntụ ọka achicha dị ala.
Mgbe ị na-eme usoro ude ude, ị na-ete ntụ ọka ahụ na bọta na ịkwụsị gluten ka ọ ghara ịmalite. Nke a na - emepụta akwa achicha na nro. Mgbe ị gbakwunye mmiri ara ehi na mmanụ, ị ga-agwakọta maka nkeji 2 zuru ezu iji zụlite gluten ahụ. Nke a na-emepụta usoro nke achicha ahụ. Ọ bụrụ n ’agwakọtaghị nkeji abụọ, nri gị nwere ike ịda.
Mee nkpuchi nke gi ( achicha goop !) Ihe kacha mma tọhapụ mgbe ọ bụla!
Chọrọ enyemaka ọzọ na ịme achịcha mbụ gị? Lelee m otú icho mma gị na mbụ achicha blog post.
Na-eje ozi:1na-eje ozi|Calorisị:445kcal(22%)|Carbohydrates:46g(iri na ise%)|Protein:4g(8%)|Abụba:28g(43%)|Abụba Ajuju:18g(90%)|Cholesterol:88mg(29%)|Sodium:Ogbe 113mg(5%)|Potassium:98mg(3%)|Eriri:1g(4%)|Sugar:35g(39%)|Vitamin A:807IU(16%)|Calcium:48mg(5%)|Iron:1mg(6%)
Achịcha Blueberry A Na-arụ n’ụlọ
Nickelodeon na -ekerịta Teaser maka Rockos Modern Life Movie Hit Netflix na August
Focaccia Bread Art Ntụziaka
Akụkọ banyere Mel Gibsons Revenge Flicks
Trevor Noah na Tomi Lahren na -eche ihu maka Trump, KKK na Black Lives Matter na Ngosi Kwa ụbọchị
nnukwu bọọlụ basketball n'ụwa
ị na -egbu m obere ụmụaka
Ndị egwuregwu bọọlụ basketball iri ise kacha nwee egwuregwu
ebee ka m nwere ike ree akpụkpọ ụkwụ dị m nso
Nwa nwanyị Nick Sabans boro Ohio steeti ebubo ụgha COVID-19 na egwuregwu igbu oge
Nwa nwanyị Nick Sabans boro Ohio State ebubo na ọ na-eme nchọpụta COVID-19 iji zụta oge maka quarterback ha merụrụ ahụ iji gwọọ tupu egwuregwu asọmpi mba.
Ntughari: TVs kacha echegharị echegharị
Futuramas na -eji olu ọhụrụ niile alọta? Ọ gaghị abụ oge mbụ ihe nkiri agbanwere ndị na -eme ihe nkiri dịka akụkụ ụgbọ ala.
Akwụkwọ akwụkwọ ịgba alụkwaghịm nke Mary J. Blige kwuru na o nweghị ego ọ bụla site n'ọrụ ya
Mary J. Blige na -ekwu na ya enwetaghị ego ọ bụla site na ọrụ ya na Mudbound n'akwụkwọ iwu gbara akwụkwọ tupu ikpe ịgba alụkwaghịm ya.
© Copyright ©. Ikike Niile Echekwabara.